राहत दिने, छुट दिने बैंक र वित्तिय संस्था मात्रै हुन्, राज्य छैन, २ प्रतिशत छुट भनेको २५/३० अर्ब हुन्छ - Aathikbazarnews.com राहत दिने, छुट दिने बैंक र वित्तिय संस्था मात्रै हुन्, राज्य छैन, २ प्रतिशत छुट भनेको २५/३० अर्ब हुन्छ -
images for creative writing ks3 geometry homework help slader write my college application essay for me leadingacreative writing workshop can i write my thesis statement creative writing prompts for plays creative writing character exercises pay someone to do my essay uk creative writing jobs long island university of st andrews mfa creative writing as homework help san francisco state university creative writing department creative writing cip code cover letter grant writer i need help with my algebra2homework cover letter for writers resume homework help pompeii creative writing portfolio desert island creative writing writing custom mediator de vall will writing service creative writing statement riverside mfa creative writing yale creative writing major i can't make myself do my homework teach yourself creative writing series creative writing first person creative writing display title can i write my own business plan how to make your creative writing more interesting
गोबिन्द प्रसाद ढकाल, अध्यक्ष डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियसन, सीइओ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
० अध्यक्षज्यू राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर २ प्रतिशत ब्याजको छुट दिने निर्देशन नै गरेको अवस्थ छ नि ?
सही हो । तर, राहत पीडितले पाउनु प¥यो । जागिर खाने, रेगुलर तलब बुझ्ने हुने खानेहरुले राहत किन चाहियो प्रश्न यो हो ? पर्यटन, हवाईजहाज, होटल, यातायात जस्ता पूर्ण बन्द भएको लागि राहत भनौ वा २ प्रतिशत छुट दिने हो । होइन र ?
० त्यसो भए २ प्रतिशत राहत ग्राहकहरुले नपाउने नै भए त ?
कसैले भन्यो पाउदैनन् भनेर ? राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै दिएपछि बैंक र वित्तिय क्षेत्रले दिन्न भन्न पाइन्छ ? तर, हाम्रो भनाई चाहि के हो भने पीडितले २ प्रतिशत छुट पाउनु पर्दछ भन्ने मात्रै हो नि ।
० डिपोजिटका ब्याज केही दिन अगाडी घटाउनु भयो फेरि २ प्रतिशत घटाउने प्रस्ताव सहित राष्ट्र बैंक जानु भएको खबर छ नि ?
२ प्रतिशत ब्याज छुट दिनु पर्ने भएपछि महंगोमा किनेर सस्तोमा बेच्ने नीति छैन होलानि ? १२÷१३ प्रतिशतका फिक्स डिपोजिट हामी कहाँ छन् । अब लगानी कतिमा गर्ने ? हामीलाई चाही राहत चाहिदैन के हामी यस समाजका मान्छे वा संस्था होइनौ त ?
० होइन अध्यक्षज्यू यो त विषम र अप्ठ्यारो अवस्था हो । यो बेला नाफा नोक्सान खोज्ने कि राहत दिने हो त?
सर नदिने भनिएकै छैन, दिने हो । तपाईलाई एउटा उदाहरण दियौं । भोक लागेकालाई खान दिने हो । अघाएकालाई किन दिनु प¥यो । सबैलाई दिने कुरा त चन्दा होइन र । पर्यटन कहाँ पुग्यो ? एयरलाइन्स कहाँ पुग्यो ? यातायत होटल कहाँ पुग्यो ? यी र यस्तालाई राहत चाहिएको हो । सधै आम्दानी भैरहेका र चलिरहेकालाई किन राहत ?
० बैंकहरु नाफामुखी भएको र टाई लगाएका गुण्डा हुन भन्ने आरोप पनि छ नि ?
आरोप लगाउदैमा हुन्छ । हामीले राज्यलाई कति कर तिरेका छौं । योगदान कति छ । जे पनि भन्ने, अर्को कुरा नाफा कमाउन नै व्यवसाय चलाएको हो । कसले घाटामा काम गर्दछ त ? लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने दायित्व पनि त होला नि ।
० राज्यले नै सबैलाई समेटेर राहत ल्याउने कुरा सहि हो त ?
सहि हो । सबै पीडित छन् । भने सबैलाई बैज्ञानिक तरिकारले राहत कार्यक्रम ल्याउनु प¥यो । बैंकले पनि त सबै शुल्क मिनाह गरेका छन् । आम्दानी यो ३०/३५ दिनमा के छ त ? बैंक मात्रै हो राहत दिने ? राज्य पनि होला नि ?
० त्यसो भए २ प्रतिशत छुट पाउदैनन त ?
तपाईले कुरा बुझ्नु भएन । किन नपाउने बाबुले देउ भनपछि छोराले खल्तीमै राख्न मिल्दछ । दिने हो यो बेला तर पीडितलाई दिनु प¥यो भन्ने कुरा हाम्रो चाहि हो ।
करिब ८० प्रतिशले २ प्रतिशतको ब्याज छुट पाउँदै छन् । नेपालका बैंकर वित्तिय क्षेत्रबाट मात्रै २५÷३० अर्ब राहतको नाममा छुट हामी दिदैछौं । यसले भविष्यमा बैंक र वित्तिय क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्दछ । तपाई अकडा निकाल्न पनि सक्नु हुँदैन नि । यसबाट राज्यको करमा पनि ठूलो असर गर्ने देखिन्छ ।
2 प्रतिक्रिया on “राहत दिने, छुट दिने बैंक र वित्तिय संस्था मात्रै हुन्, राज्य छैन, २ प्रतिशत छुट भनेको २५/३० अर्ब हुन्छ”
2% ले 25/30 अर्ब हुने रहेछ।14% ले त 175/210 अर्ब बुझाईदो रहेछ।6% बच्यो भने पनि 75/90 अर्ब हुने भयो।
देवेन्द्र पोख्रल satidhovan3shyingja says:
गोबिन्द सर को भनाई ठिक छ
नेको इन्स्योरेन्स को २४ औ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
कोरोना लाग्दैन भन्दै भ्रम फैलाउने पास्टर पक्राउ